Landa i-Fac isikhathi se-Windows 10 PC, Ideskithophu & Ikhompyutha ephathekayo
1 Download FaceTime amawindi Pc and Laptop 32bit – 64kancane
1.1 Isicelo se-Windows:
1.2 FaceTime Izici:
1.3 Ezinye Izici Coolest ka FaceTime
2 Izimfuneko FaceTime:
Download FaceTime amawindi Pc and Laptop 32bit – 64kancane
Landa i-PC yesikhathi esithileSawubona FaceTime Addicted! Uma umlandeli omkhulu we lokusebenza FaceTime futhi usebenzisa iPhone yakho futhi MacBook ke ungase uthole lolu hlelo lokusebenza iwindi lakho pc.
FaceTime ngoba pc amawindi 10
FaceTime amawindi 8
FaceTime amawindi laptop
download FaceTime amawindi
thwebula FaceTime amawindi 8.1
thwebula FaceTime amawindi 7 64 kancane
FaceTime amawindi 10 cnet
FaceTime amawindi 10 pc
Ngandlela-thile udinga ukulandela abanye namacebo ukulanda futhi ifake FaceTime ku Iwindi yakho pc.
Ngakho Lesi sihloko sinikeza lonke ulwazi olufanele okuzokwenza ukufundisa indlela ongakwenza ukulanda futhi ifake FaceTime kuzingxenyekazi ze-Non-iOS ezifana neWindows 7, 8 kanye neWindows 10.
I-FaceTime ingenye yezinhlelo zokusebenza ezivelele zevidiyo nezomsindo ze-Apple. Esikhathini esedlule, abantu asetshenziswa ukuze exhunywe nomunye ngosizo amafoni wendabuko noma handsets kodwa FaceTime uye kakhulu washintsha lo mkhuba. Manje abantu sebengakwazi sizikhandle ukwenza amakholi wefoni, imilayezo namakholi ngisho isiqophi ngosizo lensiza FaceTime.
Landa i-PC yesikhathi esithileHlola uhlelo lokusebenza oluningi lwe-PC
This allows your phone to get connected to others via a cellular network or Wi-Fi connection. It kuvumela abasebenzisi ukuba enze angenamkhawulo amakholi wevidiyo ukuze abangane babo, umndeni ibhizinisi oxhumana nge-iPod asekelwe, iPhone, -iPad, Mac noma i-Windows nge videotelephony inthanethi.
Lolu hlelo lokusebenza ngendlela emangalisayo kwehle amabanga phakathi nabantu uphinde wenze kube lula kakhulu ukuhlala uxhumene izimpilo yakho yemisindvo.
ekuqaleni, Apple ithuthukiswe isicelo for iOS kanye Mac os amadivayisi yayo futhi kamuva, ngenxa yokuthandwa kwayo,, ke manje isiyatholakala amafasitela kanye.
Kodwa ukuba lolu hlelo lokusebenza iwindi lakho udinga ukufakwa third-party. Kulesi sihloko, sizobe ukwabelana ukufakwa stepwise lolu hlelo lokusebenza ukuba zisetshenziswa amawindi.
Uma ufisa ukwazi ke okunye, sicela uqhubeke ufunda athikili yethu. Sizophinde ngezindaba ezithile idatha futhi ithakaseleka mayelana lolu hlelo.
Ekupheleni kwalesi sihloko, uyokwazi ukujabulela uhlelo lakho lokusebenza oluthandayo FaceTime ku amafasitela yakho.
FaceTime buya omunye ebanda kunazo isiqophi zokusebenza obiza inthanethi isiqophi sefoni kanye isibuse kwa kuzo zonke ezinye izimbangi enkulu njenge -Google Duo, Skype, WhatsApp, Imo, Bingo kanye nohlu. Uhlelo lokusebenza walungisiswa kuwufanele ukuhlinzeka izinga okusezingeni eliphezulu kanye nemiphumela engaguquki zomsindo.
Esinye isici ukuncintisana lolu hlelo lokusebenza has a interface yomsebenzisi-friendly. Abanye impahla esithambile e isofthiwe emakethe abakwazi ukunikeza ukuthi komkhawulokudonsa.
izinkampani ezikhishwe software enze kube nokwenzeka kuwo wonke umuntu ukufaka isicelo olusemthethweni Apple-Windows 7 noma kamuva. Manje, kungenzeka ngawe FaceTime ngamafasitela iPhone, amafasitela ukuze iPad, amafasitela Mac & amafasitela ukuze amafasitela.
Konke okudingayo okuhlangene internet connection futhi isicelo imahhala yezindleko ukusebenzisa emafasiteleni.
lokusebenza FaceTime luphakeme zonke ezinye isofthiwe videotelephony njengoba kuchaziwe ngenhla. Izithombe libukhali kakhulu futhi kwencazelo eliphezulu nokubukeka ikhubalo kushintshwe zonke ezinye izinketho ayatholakala emakethe inthanethi.
Ezinye Izici Coolest ka FaceTime
FHD- Incazelo Okugcwele okusezingeni eliphezulu etibonwa iyona iBombela isicelo.
I-interface yomsebenzisi enobungane iyenza isebenzisane kangcono nabasebenzisi
Ukusetshenziswa siyindlela olungenamkhawulo ungaxhuma kuphi nanoma nini.
Easy ukuhlela uhlu lwakho loxhumana nabo
uhlu Izintandokazi oxhumana nabo ku-kukusiza ukufinyelela nje okukodwa
Mahhala yezindleko Ukushaya elinye iphuzu plus we Ngokuhlala uxhumekile.
Ukushaya kwevidiyo kweqembu kukwenza ukwazi ukuxhumana nabasebenzisi abaningi ngasikhathi sinye.
Texting zingenza nesicelo.
Spammers kanye nabasebenzisi engabalulekile angaluboni noma ivinjwe kusuka ohlwini.
Abasebenzisi Ungaxhuma kumadivayisi ezahlukene ezifana PC, lwe-Windows, iPhones, -iPad, iPod, Mac.
Lawa ukhangwa yokuthi siyaqiniseka ukuthi abafundi bethu angathanda ukuzwa isicelo. Kusemqoka ukuba siqonde izidingo eziyisisekelo ngaphambi kokufaka lokusebenza FaceTime amawindi. Izidingo eziyisisekelo zihlanganisa
Inguqulo yakho amafasitela kufanele okungenani XP. Uthole okuhlangenwe nakho okungcono, thina ongacabanga ukuthi kufanele ube amawindi & noma izinguqulo kamuva.
I ijubane CPU kumelwe futhi iyophakama kuno- 1GHz.
I RAM kufanele kube ubuncane 2 GB noma ngaphezulu.
Kube kufanele esisekelwa esakhelwe ikhamera I-video bizo noma okunye ukuthola ikhamera ephathekayo asekelwe le njongo.
Ukuze ukushaya komsindo, kufanele ube I-microphone. Inqubomgomo ukhathazekile abasebenzisi kufanele asebenzise ama-headphone nge akhelwe ngaphakathi.
Into ebaluleke kakhulu ukuba kufanele ibe nezimfanelo intanethi.
Njengoba kushiwo ngaphambili ukuthi FaceTime uhlelo lokusebenza esemthethweni Apple kanye onjiniyela hhayi okwamanje iyiphi inguqulo i-Windows kuphela.
Ngakho ungakwazi kuphela uthole lolu hlelo kusukela website esemthethweni e-APK format kusetshenziselwa onke iOS ne-Mac amadivayisi. Ngenhlanhla-Windows, esinalo ezinye izinhlelo etholakalayo online ukuyifaka ngezinhlelo zabama-third party.
Ake ukuhlanganyela abafundi bethu lapha igxathu negxathu ukulandwa izinqubo lapha:
Ama-emulators e-Android akhishwe ngabathuthukisi abavela eceleni ukufaka amafomethi ahlukile. isofthiwe Lezi zicelo ikuvumela ukusebenzisa amafayela format-APK ka FaceTime ku amafasitela yakho. Uma kakade efakwe kusistimu yakho, nje ulandele inqubo. Ukuze newbies, sicela ukulanda BlueStacks kusukela isixhumanisi inikezwe:
Lena ikhasi www.bluestacks.com
Inqubo kanye ne-software kungokwenyama ngokuphelele zomthetho ngakho asonge izandla uphumule.
Usayizi wefayela mkhulu ngu. 469MB futhi kuzothatha isikhashana ukuze ulande.
Ngemva ilandwe, ukuyifaka futhi uma kwenziwa, kabusha amawindi wakho.
Vula BlueStacks isicelo kusukela ekuqaleni imenyu. Kuzothatha isikhathi ukuqalisa ngowokuqala imvelo nokuvumelanisa okuzenzakalelayo zokusebenza olunikezwa uhlelo. Ngakho musa uphazamisa inqubo kokuqala.
Uma isimiso siqala, iya kumenyu bese chofoza play esitolo izicelo.
Esikhathini play esitolo, thola FaceTime e inketho search.
Landa uhlelo lokusebenza bese uchofoza "run"Ngqo ukufaka isicelo. Futhi unga ukulondoloza ifayela thwebula uma ufisa ukuyifaka kamuva.
Lapho usukulungele ukufaka isicelo kusistimu yakho bese ulandela imiyalelo.
Phakathi inqubo yokufaka, kungenzeka ukuthi utshelwa amalungelo umlawuli noma iphasiwedi nomqondisi noma isiqinisekiso. Sicela uthayiphe iphasiwedi edingekayo noma ulwazi wabuza.
Ekugcineni, FaceTime usulungile ukusebenzisa ku yakho amafasitela.
Yakha umsebenzisi wakho siqu I-Id nephasiwedi futhi okufanayo izosetshenziswa noma nini ungathanda ngemvume.
Uma izoqalisa uhlelo lokusebenza okokuqala, uzokwaziswa ukungena-Id lomsebenzisi nephasiwedi. Njengoba usuvele udale i-ID yakho siqu esiyingqayizivele lomsebenzisi nephasiwedi, liyofunwa lapha ukuze eminye uhlelo. Uma kokuqala senqubo yokudalwa ID ehlukile kwenziwa, esibonakalayo main azoboniswa.
Zonke oxhumana wanezela, kufihlwe noma ivinjiwe zilawulwa kusukela esibonakalayo main. Iya okuthandwa isethwe ku oyifisayo njengoba ngamunye nezidingo zakho. Thanda iPhone, -iPad, iPod & Mac, ungase futhi ukudlala isibonisi setting. Lapha ungenayo ukujikisa kwesikrini wena kodwa ungenza izinguquko ezithile nge ongakhetha.
Uma usebenzisa FaceTime okokuqala, futhi yafuna ukwazi ngakho ngaphezulu, ungase futhi uvakashele i-website yabo ukwesekwa ulwazi oluthile enemininingwane. Isixhumanisi inikezwe ngezansi:
Ukuhwebelana kwembulunga yonke kusize abantu emhlabeni wonke ukuthola ukuvezwa okuningi kanye nentuthuko. FaceTime akukho mayelana washo ethatha ubhiya noma mug bese wabelana bukhoma nabangani kanye nomndeni wakho kuphela.
It usulandise wasiza ezimakethe zomhlaba jikelele ukuze ahlale exhunyiwe nomunye.
Apple njalo ukukhulula izinguqulo ezintsha FaceTime imiphumela okungcono futhi kakhulukazi sonkana izidingo yomsebenzisi.
Landa Ukungqubuzana Kwemindeni Kwe-PC Windows 7, 8, 10 mahhala
Landa i-Mematic ye-PC newindi 7, 8 futhi 10
I-Worldbox pc – I-Worldbox Ye-PC [lwe-Windows 10, 8, 7 ne-Mac]
Ukubonisa kwe-Wifi (I-Miracast) ye-PC - Windows 7/8/10 / Mac - Ukulanda kwamahhala